Dunida galbeedka maanta waxaa jira labo isbeddel nasiib darro ah oo ku saabsan shaydaanka, sheydaanka lagu sheegay Axdiga Cusub sida cadow aan loo meel dayin iyo cadowga Ilaahay. Dadka badankiisu ma oga shaydaanka ama ma dhaleeceeyaan doorka ay ku leeyihiin abuurista fowdo, silica iyo shar. Dad badan, fikradda ibliiska dhabta ah waa uun hadhaaga khubarada duugoobay, ama muuqaal ugu fiican adduunka.
Dhanka kale, Masiixiyiintu waxay qaateen aaminsanaanta khuraafaadka ah ee ku saabsan Ibliiska ee loo yaqaan "dagaalka ruuxiga ah". Waxay Ibliis siiyaan aqoonsi xad dhaaf ah waxayna "la dagaallamaan" qaab aan ku habooneyn taladii aan ka helnay Qorniinka. Qodobkaan waxaan ku aragnaa macluumaadka Baybalku na siinayo ee ku saabsan Shaydaanka. Annagoo ku hubaysan fahamkan, waxaan ka fogaan karnaa dabinnada xagjirka ah ee aan kor ku soo xusnay.
Qoraallada ka yimid Axdigii Hore
Ishacyaah 14,3-23 iyo Yexesqeel 28,1-9 mararka qaar waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin asalka shaydaanka sidii malag ku dembaabay. Faahfaahinta qaar waxaa loo arki karaa tixraacyo shaydaanka. Si kastaba ha noqotee, macnaha guud ee qaybahaani waxay muujinayaan in qaybta ugu weyn ee qoraalku ay tilmaamayso nacasnimada iyo kibirka boqorrada aadanuhu - iyo boqorradii Baabuloon iyo Turos. Ujeeddada labada qaybood waa in boqorradu ay maareeyaan shaydaanka oo ay ka muuqdaan ujeedooyinkiisa xun iyo nacaybka Eebbe. Ka hadlida hogaamiyaha ruuxiga ah, Shaydaanka, waxaa loola jeedaa inuu ku hadlo hal neefsi wakiiladiisa aadanaha, boqorada. Waa hab lagu yiraahdo Shaydaanka ayaa adduunka xukumay.
Buugga Ayuub, tixraaca malaa'igaha ayaa sheegaya inay joogeen abuuritaanka dunida oo ay ka buuxaan yaab iyo farxad (Hibo 38,7: 1). Dhanka kale, Shaydaanka Job 2-XNUMX sidoo kale wuxuu umuuqdaa inuu yahay malaa'ig ahaansho, maadaama la sheegay inuu ka mid ahaa "wiilashii Ilaah". Laakiin isagu waa cadowga Ilaah iyo xaqnimadiisa.
Waxaa jira tixraacyo ku jira Kitaabka Quduuska ah oo ah “malaa'igihii dhacay” (2 Pt 2,4: 6; Jud 4,18; Hi XNUMX:XNUMX), laakiin ma jiraan wax muhiim ah oo ku saabsan sida iyo sababta Shaydaanka u noqday cadowga Ilaah. Qorniinku nama siinin faahfaahinta nolosha malaa'igaha, ama malaa'igaha “wanaagsan”, ama malaa'igihii dhacay (oo sidoo kale loo yaqaanno jinniyo). Kitaabka Quduuska ah, gaar ahaan Axdiga Cusub, wuxuu aad u daneynayaa inuu na tuso Shaydaanka oo aan ahayn qof isku dayaya inuu carqaladeeyo ujeeddada Eebbe. Waxaa loo sheegay inuu yahay cadowga ugu weyn ee dadka Ilaahay, kaniisada Ciise Masiix.
Axdiga Hore, Shayddaanka ama Ibliiska looma magacaabin qaab caan ah. Sikastaba ha noqotee, aaminsanaanta awoodaha quwadda inay la dagaallamaan Ilaah waxay ku caddahay ujeeddooyinka dhinacooda. Laba ujeeddooyinka Axdiga Hore oo matalaya Shaydaanka ama Shaydaanka ayaa ah biyaha iyo waxyaabaha firfircoon. Iyagu waa sawirro matalaya shaydaanka shaydaanka ee dhulka qabsada meeshuu ku sugan yahay oo Ilaah la dagaallamaya. Ayuub 26,12: 13-13 waxaan ku aragnaa sida uu Ayuub u sharraxay in Ilaah “badda qallafsanaaday” iyo “Rahab burburiyey”. Rahab waxaa loo yaqaanaa “abeesada duuleysa” (aayadda XNUMX).
Meelaha yar ee Shaydaanka lagu tilmaamay inuu yahay shaqsi ahaan Axdigii Hore, Shayddaanka waxaa lagu muujiyey inuu yahay eedeeye doonaya inuu wax beero oo dacweeyo (Sach 3,1: 2-1), oo ku kiciya dadka inay ku dembaabaan Ilaah ( 21,1Chro 1,6) wuxuuna u adeegsadaa dadka iyo waxyaabaha ka dhalan kara xanuunka iyo silica badan (Hi 19-2,1; 8-XNUMX).
Buugga Ayuub waxaan ku aragnaa in Shaydaanka la yimaado malaa'igaha kale si uu naftiisa ugu muujiyo Ilaah sidii isagoo loogu yeedhay golaha jannada. Waxa jira tixraacyo kale oo Baybal ah oo ku saabsan isu imaatinka jannada ee malaa'igaha oo saameeya arrimaha dadka. Mid ka mid ah kuwan, ruux beensheegid ah ayaa khiyaaneeya boqorka inuu dagaal galo (1Ki 22,19: 22-XNUMX).
Ilaah waxaa lagu muujiyey inuu yahay "madaxdii Laawiyiintii burburiyey, oo wuxuu u siiyey xayawaankii duurjoogta ahaa inay cunaan" (Sabuurradii 74,14:27,1). Waa kuma leviatan? Isagu waa "bahalkii badda" - "abeeso duuleysa" iyo "abeeso daran" oo Rabbigu ciqaabi doono "waqtiga" markay Ilaahay ka fogeeyo sharkasta oo dunida oo uu dhiso boqortooyadiisa (Ishacyaah XNUMX: XNUMX).
Ujeedada Laawiyiinta sida abeesada waxay dib ugu noqotaa Beer Ceeden. Halkan abeeso - "oo ka caqli badan xoolaha duurka jooga oo dhan" - waxay ku sasabtaa dadka inay ku dembaabaan Ilaah, taas oo keenta dhicitaankoodii (Bilowgii 1: 3,1-7). Tani waxay keenaysaa wax sii sheegid kale oo dagaal mustaqbal ah oo dhexmara isaga iyo abeesada, oo masaska u muuqdo inuu ku guuleysto dagaal muhiim ah (xasiloonida ciribta Ilaaheey), kaliya markaas ka dib wuxuu lumin doonaa dagaalka (madaxa ayaa la burburin doonaa). Waxsii sheegiddan Ilaah wuxuu abeesada ku yiri: Waxaan rabaa inaan cadawga idinka dhigo adiga iyo naagta, iyo inta u dhaxaysa farcankaaga iyo farcankeeda; oo madaxaaguu burburin doonaa, adiguna cedhibbahaad ku dhejin doontaa "(Bilowgii 1:3,15).
Qoraallada Axdiga Cusub
Macnaha guud ee bayaankan waxaa lagu fahmi karaa iftiinka abuurista Wiilka Ilaah ee loo yaqaan Ciise Naasared (Yoon 1,1: 14). Waxaan ka aragnaa Injiillada in Shaydaanku isku dayo inuu hal jid ama mid kale ku burburiyo Ciise laga bilaabo maalinta dhalashadiisa ilaa dhimashadiisa iskutallaabta dusheeda. In kastoo Shaydaanka uu ku guuleystey dilkii Ciise isagoo adeegsanaya wakiilkiisii ​​aadanaha, ibliiskii ayaa dagaalka ku lumiya dhimashadiisa iyo sarakicistiisa.
Kacaankii Ciise ka dib, halgankii cosmic ee u dhexeeya aroosadda Masiixa - dadka Ilaah - iyo Ibliis iyo dameerkiisii ​​ayaa sii socday. Laakiin qorshaha Eebbe wuu guuleystaa wuuna sii jirayaa. Ugudambeyn, Ciise wuu soo laaban doonaa oo baabi'in doonaa diidmada ruuxiga ah ee ka soo horjeedda (1 Korintos 15,24: 28-XNUMX).
Buugga Muujintii wuxuu si gaar ah u matalaa halgankan u dhexeeya awoodaha shar ee dunida, oo ay ka dambeeyaan Shaydaanka, iyo awoodaha wanaagsan ee kaniisadda, oo uu hoggaaminayo Eebbe. Buuggan oo leh calaamado buuxa, oo ku jira hiddaha suugaaneed ee Apocalypse, laba magaalo oo noloshu ka weyn tahay, Baabuloon iyo midda weyn, oo ah Yeruusaalemta cusub, waxay matalaan laba kooxood oo adduunyo oo dagaal ku jira.
Markuu dagaalku dhammaado, sheydaanka ama shaydaanku waxay ku xidhn yihiin yaamayska waxaana laga horjoogsanayaa inuu "adduunka oo dhan khiyaaneeyo" sidii uu hore u sameeyay (Rooma 12,9: XNUMX).
Ugu dambayntii waxaan aragnaa in Boqortooyada Ilaah ay ka adkaato shar oo dhan. Waxaa lagu muujiyey magaalo fiican, oo ah magaalada quduuska ah, oo ah Yeruusaalemta Ilaah - oo ah meeshii Ilaah iyo Wanka la dhex joogaan dadkooda nabad iyo farxad weligeed ah, oo ay suurtogal ka tahay farxadda wadaagga ah ee ay wadaagaan (Muujintii 21,15.) , 27-20,10). Shaydaanka iyo awoodaha sharka oo dhan waa la baabi'iyey (Muujintii XNUMX:XNUMX).
Ciise iyo Shaydaan
Axdiga Cusubi, Shayddaanka waxaa si cad loogu aqoonsaday inuu yahay cadowga Ilaahay iyo aadanaha. Jid ama mid kale, sheydaanka ayaa mas'uul ka ah silica iyo xumaanta adduunkeena. Wasaaraddiisa bogsiinta, Ciise xitaa wuxuu tixraacayaa malaa'igaha dhacay iyo Shaydaanka sababaha jirada iyo itaal darrida. Dabcan, waa inaan ka taxadarnaa inaanu ugu yeerno dhibaato kasta ama cudur kasta dharbaaxo toos ah oo ka imanaya shaydaanka. Si kastaba ha noqotee, waa wax barid ah in la ogaado in Axdiga Cusubi uusan ka cabsanayn in lagu eedeeyo shaydaanka iyo iskaashikiisa xun ee musiibada badan, oo ay ku jiraan cudurada. Cudurku waa shar, ee maahan wax Eebbe u qoray.
Ciise wuxuu ugu yeedhay Shaydaan iyo jinniyo dhicisoobay "Ibliis iyo malaa'igihiisii" kuwaas oo "dab weligeed ah loo diyaariyey" (Mt 25,41:XNUMX). Waxaan ka aqrinaynaa Injiillada in jinniyo ay yihiin sababaha cudurada jirka iyo jirro kaladuwan. Xaaladaha qaarkood, jinniyo ayaa qabta maskaxda dadka iyo / ama jirkooda, taasoo keentay daciifnimo sida nabarro, carrab la ', indho la'aan, naafo qayb ah, iyo noocyo kala duwan oo waalan.
Luukos wuxuu ka hadlayaa haweeney uu Ciise kula kulmay sunagogga oo "jinni qabay siddeed iyo toban sannadood oo bukay." (Luukos 13,11:16). Ciise wuu ka daayay cudurkeeda oo waxaa lagu dhaleeceeyay inuu bogsado sabtidi. Ciise wuxuu ugu jawaabay: Tani miyaanay ahayn ina gabadhii Ibraahim oo Shayddaan siddeed iyo toban sannadood xidhay inay xidhnaato oo xidhnaato maalintaas? (V. XNUMX).
Xaaladaha kale, wuxuu daaha ka qaaday jinniyo sababayaal ah sababta oo ah ilmo naaqusyo aad u xun oo bishii la soo dhaafay bukooday (Mt 17,14: 19-9,14; Mk 29-9,37; Lk 45-10,1) , Ciise wuxuu si fudud u amri karaa jinniyadaas inay ka tagaan kuwa buka oo addeecaan. Markuu sidaa yeelay, Ciise wuxuu muujiyey inuu leeyahay amar buuxda oo ku saabsan dunida Shaydaanka iyo jinniyada. Ciise wuxuu isla amarkiisa jinniyada ka saaray xertii (Mt XNUMX).
Rasuul Butros wuxuu ka hadlay adeegga bogsashada ee Ciise inuu yahay kan dadka ka xoreeyay cudurada iyo cudurada Shaydaanka iyo jinniyadiisa xunxun ay iyagu ahaayeen kuwa toos ah ama aan toos ahayn. Waad ogtahay waxa Yahuudiya oo dhan ka dhacay ... sida uu Ciisaha Naasared ku subkay Ruuxa Quduuska ah iyo xoog; wuu socday oo wanaag sameeyey oo wuu bogsiiyay kuwa kasta oo Ibliiska ka hooseeya, maxaa yeelay, Ilaah baa la jiray isaga (Falimaha 10,37: 38-XNUMX). Aragtidan ku saabsan shaqada Ciise ee bogsashada waxay muujineysaa aaminsanaanta shaydaanka inuu yahay cadowga Ilaahay iyo abuurkiisa, qaasatan aadanaha.
Wuxuu dhigayaa dambiga ugu dambeeya ee silica iyo silica shaydaanka waxaana lagu gartaa taas
"Dembile koowaad". Ibliis ayaa bilowgii dembaabay ”(1 Yooxanaa 3,8: 25,41). Ciise wuxuu Shayddaan ugu yeeraa "amiirkii jinniyooyinka" - taliyihii malaa'igihii dhacay (Mt 3,27:XNUMX). Ciise wuxuu ku jabiyay saameynta Ibliisku ku leeyahay dunida shaqadiisa badbaadadiisa. Shaydaanku waa “kan xoogga leh” gurigiisa (dunida) Ciise uu galay (Mk XNUMX). Ciisena wuxuu "ku xidhxidhay" kan xoogga lahaa oo "u qaybiyey dhaca" "alaabtiisa ayuu wataa, boqortooyadiisa].
Taasi waa sababta Ciise u yimid jidhka. Yooxanaa wuxuu qoraa: "Wiilka Ilaah wuxuu u muuqday inuu baabi'iyo shuqullada Ibliiska" (1 Yooxanaa 3,8: 2,15). Warqadda Kolosaylos waxay ka hadlaysaa shaqadan la baabi'iyay iyadoo loo eegayo ereyga 'cosmic': "Wuxuu xaraashay awoodaha iyo awoodaha awoodooda wuxuuna si cad u soo bandhigay oo ka dhigay inay ku guuleystaan ​​Masiixa" (Kolos XNUMX: XNUMX).
Warqaddii Cibraaniyadu waxay si faahfaahsan uga hadlaysaa siduu Ciise tan u gaadhay: “Maxaa yeelay carruurtu haatan waa hilib iyo dhiig, isaguna sidaas oo kaluu u aqbalay si uu dhimashadiisa ugulakaco kuwa xukuma dhimashada, kan ah Ibliis, oo wuxuu furtay kuwii iyagu naftooda u baqay iyagoo cabsanaya dhimashada oo dhan. (Cibraaniyada 2,14: 15-XNUMX).
La yaab maahan, Shaydaanka wuxuu isku dayaa inuu burburiyo ujeeddada Ilaah ee wiilkiisa, Ciise Masiix. Ujeeddada Shaydaanka ayaa ahayd inuu dilo erayga jidh ahaaneed, Ciise, markii uu ilmuhu ahaa (Rev 12,3; Mt 2,1-18), inuu isku dayo intii uu noolaa (Lk 4,1-13) iyo isaga xidho oo dil (aayadda 13; Luukos 22,3: 6-XNUMX).
Shaydaanku wuxuu “ku guuleystey” weerarkii ugu dambeeyay nolosha Ciise, laakiin dhimashadii Ciise iyo sarakiciddii ku xigtay ayaa shayday oo dhalleecey sheydaanka. Ciise wuxuu ka dhigay "goob fagaare ah" oo ka fog dariiqa dunida iyo masiibada uu soo bandhigay shaydaanka iyo kuwa raacsan. Waxay u caddaatay dhamaan kuwa doonaya inay maqlaan in habka jacaylka Eebbe oo keliya uu qumman yahay.
Iyada oo loo marayo qofka Ciise iyo shaqadiisa badbaadada, qorshooyinka Ibliis ayaa dib loo beddelay oo laga adkaaday. Markaa, Masiixu wuxuu mar horeba shaydaanka ka adkaaday noloshiisa, dhimashadiisa, iyo sarakicistiisa isagoo shaaca ka qaaday ceebta sharka. Habeenki uu khiyaanaynayay, Ciise wuxuu xertiisii ​​ku yidhi: "In aan Aabbaha u tago ... amiirka dunidan hadda waa la xukumay" (Yooxanaa 16,11:XNUMX).
Markuu Masiixu soo noqdo, saamaynta shaydaanka ee adduunka ayaa joogsan doonta oo guuldarradiisa dhammaystiranna way caddayn doontaa. Guushan ayaa ku dhici doonta isbadal waara oo rasmi ah dhamaadka waqtigan (Mt 13,37-42).
Amiirkii xoogga badnaa
Intii lagu gudajiray wasaaradiisa dhulka, Ciise wuxuu cadeeyay in "Amiirka dunidan la eryi doono" (Yooxanaa 12,31:14,30) oo wuxuu yidhi amiirkan "awood uma laha" isaga (Joh 4,1:11). Ciise wuu ka adkaaday Shaydaanka maxaa yeelay Ibliisku ma xakamayn karin. Ma jiro jirrabaab uu Shayddaan ku tuuray Ciise oo ahaa mid ku adkaan kara inuu ka leexiyo jacaylka uu u qabo iyo aaminaadda Eebbe (Mt 12,24: 29-XNUMX). Wuxuu ka adkaaday Ibliis oo wuxuu xaday alaabtii “xoogga lahayd” - adduunkii uu ku qabsaday maxaabiis ahaan (Mt XNUMX: XNUMX-XNUMX). Annagoo ah Masiixiyiin ahaan, waxaan ku nasan karnaa iimaanka guushii Ciise ee ku saabsan cadaawayaasha Ilaah oo dhan (iyo cadaawayaasheenna), oo ay ku jiraan Ibliiska.
Laakiin Kaniisaddu waxay ku jirtaa xiisadda "horeba way u jirtay, laakiin ma aha wali", taas oo Ilaah sii wado inuu u oggolaado Shaydaanka inuu ku sasabto dunida oo uu ku faafo burburka iyo dhimashada. Masiixiyiintu waxay ku nool yihiin inta u dhexeysa "waa la dhammaystiray" dhimashadii Ciise (Yooxanaa 19,30:21,6) iyo "waa la sameeyay" burburintii ugu dambaysay ee xumaanta iyo imaatinka Boqortooyada Ilaah ee dhulka (Rev XNUMX). Shaydaanka wali waa loo ogol yahay inuu ka masayro awooda injiilka. Ibliiskuna weli waa amiirka aan la arki karin ee gudcurka, oo idanka Eebbe ku leeyahay wuxuu leeyahay awood uu ku dhammaystiro ujeeddadiisa.
Axdiga Cusubi wuxuu inoo sheegayaa in Shaydaanka uu yahay kan xukunta adduunka sharka leh iyo in dadku iyagoo aan ogayn ay isaga u raacaan isaga oo ka hor imanaya Ilaah. (Giriig ahaan, ereyga "amiir" ama "amiir" [sida loo adeegsaday Jn 12,31:XNUMX] waa tarjumaad ereyga Griig archon, oo tilmaamaysa mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladda ee degmo siyaasadeed ama degmo).
Rasuul Bawlos wuxuu sharxayaa in Shayddaanku yahay “Ilaaha dunidan” oo "indho tiray maanka kuwa aan rumaysanaynin" (2 Korintos 4,4: 1). Bawlos wuxuu fahmay in Shaydaanku xitaa xannibi karo shaqada Kaniisadda (2,17Th 19-XNUMX).
Maanta, inta badan dunida reer galbeedka waxay siisaa fiiro yar oo ku saabsan xaqiiqada aasaasiga u ah noloshooda iyo mustaqbalkooda - xaqiiqada ah in sheydaanku yahay ruux dhab ah oo isku daya inuu wax yeeleeyo meel kasta oo doonaya inuu carqaladeeyo ujeedada jacaylka Eebbe. Masiixiyiinta waxaa looga digayaa inay ka feejignaadaan khiyaanooyinka shaydaanka si ay uga hortagaan iyaga hanuuninta iyo xoogga Ruuxa Quduuska ah ee la midka ah. (Nasiib darrose, Masiixiyiinta qaar waxay aadeen marin habaabin xad dhaaf ah oo "ugaarsi" Shaydaanka waxayna si ula kac ah u siisay cunnooyin dheeri ah oo ku majaajilaya fikirka ah in sheydaanku yahay qof run ah oo shar leh.)
Kaniisadda ayaa looga digayaa inay ka taxaddarto aaladda Shayddaanka. Hogaamiyaasha Masiixiyiinta, Bawlos wuxuu leeyahay, waa inay ku noolaadaan nolol u qalma baaqa Ilaah ee ha "ku qabsanin shaydaanka" (1 Timoteyos 3,7: 6,10). Masiixiyiintu waa inay iska ilaaliyaan khiyaanooyinka shaydaanka waana inay xidhaan hubka Ilaah "kuwa ka soo horjeeda jinniyada sharka leh ee jannada ku jira" (Efesos 12: 2-2,11). Waa inay sidan sameeyaan si "aysan u khiyaanayn shaydaan" (XNUMX Korintos XNUMX:XNUMX).
Shaydaanka wuxuu abuuraa indho la’aan xagga ruuxiga ah xagga runta ah ee Masiix ee siyaabo kala duwan. Caqiidooyinka beenta ah iyo fikradaha kala duwan "ee ay jinniyada wax baray" waxay dadka ka dhigaan "inay raacaan jinniyo sasabasho leh" inkasta oo aysan ka warqabin isha ugu dambeysa ee marinka (1 Timoteyos 4,1: 5-1). Markii la indho tiro, dadku awood uma yeelan karaan inay fahmaan iftiinka injiilka, kaas oo ah warka wanaagsan ee Masiixu inaga badbaadiyo dembiga iyo dhimashada (4,1 Yooxanaa 2: 2-7; 13,18 Yooxanaa 23). Shayddaanku waa cadowga ugu weyn ee injiilka, "kan sharka leh", kaasoo isku daya inuu dadka ku qaldamiyo inay diidaan injiilka (Mt XNUMX: XNUMX-XNUMX).
Shaydaanka maahan inuu isku dayo inuu shaqsi ahaan kuu sasabo. Waxay ku shaqeyn kartaa dadka faafiya falsafad been ah iyo fikradaha fiqi ahaaneed. Dadku sidoo kale waxay ku noqon karaan addoonsiga qaab-dhismeedka sharka iyo marin-habaabinta ku dhex jira bulshada dhexdeeda. Shaydaanka wuxuu kaloo adeegsan karaa dabeecadeena bini aadamka ee naga soo horjeedda, si dadku ay u aaminaan inay leeyihiin "runta" markay runtiina ka tanaasulaan wixii Ilaah ka yimid iyo waxa dunida ka yimid iyo Ibliiska. Dadka noocaas ahi waxay aaminsan yihiin in nidaamkooda caqiido ee la marin-habaabiyay ay iyaga badbaadin doonaan (2Th 2,9: 10-1,25), laakiin wixii ay dhab ahaantii sameeyeen waa inay "khaldeen runta Ilaah" (Rooma 2:11,14). “Beentu” waxay umuuqataa inay fiicantahay oo run tahay maxaa yeelay Shaydaanku wuxuu soo bandhigayaa nafsadiisa iyo nidaamkiisa caqiido sidaas oo baridiisu ay u shaqeyso sida runta oo ah “malaa'igta iftiinka” (XNUMX Korintos XNUMX:XNUMX).
Guud ahaan marka laga hadlayo, Shaydaanka wuxuu taaganyahay tijaabinta iyo damacii dabeecaddeena hoos u dhacday si uu u dembaabo, sidaa darteedna waxaa loogu yeedhay "tijaabiyaha" (1Th 3,5; 1Kor 6,5; Fal 5,3). Bawlos wuxuu hoggaamiyaa kaniisadda Korintos dib ugu noqoshada Bilowgii 1 iyo sheekada Beerta Ceeden inuu uga digo inaysan ka leexan Masiixa, waa sheydaanka isku dayay inuu sameeyo. "Laakiin waxaan ka baqayaa in sida abeesadu Xaawa ugu khiyaanaysay sasabashadeeda, sidaas oo kale fikirradiinnii waa laga leexday fudaydkii iyo daacadnimadii Masiixa" (3 Korintos 2: 11,3).
Tan macnaheedu maahan in Bawlos uu rumeysan yahay in Shaydaanka shaqsi ahaantiisa isku dayay oo si shakhsi ah u khiyaaneeyey. Dadka aaminsan in "Ibliis ayaa iga dhigay sidaas" mar kasta oo ay dembaabaan ma gartaan in Shaydaanka uu adeegsanayo nidaamka xun ee uu adduunka ku abuuray iyo dabeecadda dhacday ee inaga geesta ah. Marka laga hadlayo Masiixiyiinta Tesaloniika ee kor ku xusan, khiyaanadan waxaa lagu fulin karaa macallimiin ku beeray abuurka nacaybka ka dhanka ah Paul iyagoo dadka ka dhigaya inay rumaystaan ​​inuu isagu [Bawlos] uu khiyaanaynaayo ama qarinayo hunguri ama ujeeddo kale oo xun. (1Th 2,3-12). Si kastaba ha noqotee, maadaama Ibliisku abuuray faaqidaad isla markaana uu adduunka ku maamulo, tijaabiyaha ayaa ugu dambeyntii ka dambeeya dhammaan dadka beero abuurka iyo nacaybka.
Sida uu sheegayo Bawlos, Masiixiyiinta ka soocay bulshada ee Kaniisadda dembiga ayaa dhab ahaantii "loo bixiyay Shayddaanka" (1 Korintos 5,5; 1 Timoteyos 1,20), ama "ka leexday oo raac Shaydaanka" (1 Timoteyos 5,15 , 1). Butros wuxuu adhigiisa ku dhiirrigeliyay: "Feejigna oo iska ilaali; maxaa yeelay cadowgaaga, Ibliiska ayaa ku socda sidii libaax ciyaya, oo wuxuu doondoonaa kii uu ku cuno (5,8 Pt 9). Jidka loo adkeysto Shayddaanka, ayaa sheegay in Butros, in 'la diidayo' (aayadda XNUMX).
Sidee dadku u adkeystaan ​​Shaydaanka? Yacquub wuxuu sharxayaa: “Haddaba u gudbi Ilaah. Shayddaanka iska caabiya, wuu idinka carari doonaaye. Haddaad u soo dhowaato Ilaah, isna wuu kuu soo dhowaan doonaa. Dembilayaashow, gacmihiinnu nadiifsadaan, oo qalbiyadiinna daahiriya, dadka qalloocan, (Jak 4,7-8). Waxaan u dhow nahay Ilaah markii qalbigeennu yeesho dabeecad cibaado leh farxad, nabad iyo mahadnaq isaga, kaas oo lagu koray ruuxiisa jacaylka iyo iimaanka.
Dadka aan Masiixa aqoon oo aan Ruuxiisu ku hagaagin (Rooma 8,5: 17-5) “waxay ku noolyihiin jidhka sida muuqata” (aayadda 2,2). Iyagu waa kuwa la jaan qaadaya adduunka oo raacaya “ruuxa ka dhex shaqeeya carruurta caasinimada waqtigan” (Efesos 3: XNUMX). Ruuxaani, oo lagu aqoonsaday meel kale oo aan ahayn Ibliiska ama Shaydaanka, wuxuu dadka u adeegsadaa si ay uga taxaddaaraan inay sameeyaan "damacyada jidhka iyo dareenka" (aayadda XNUMX). Laakiin nimcada Ilaah, waxaynu ku arki karnaa iftiinka runta ee ku jira Masiixa oo aan ku raacno iyada oo loo marayo Ruuxa Ilaah, halkii aan ka ogaan lahayn iyada oo la hoos imanayo saameynta shaydaanka, dunidan dhacday, iyo dabeecaddeenna daciifka ah iyo dembiga aadanaha.
Dagaalkii shaydaanka iyo guushiisii ​​ugu dambeysay
“Dunida oo dhami way dhibaataysan tahay” oo gacanta ku haysa shaydaanka] ayaa qoray John (1Joh 5,19:20). Laakiin kuwa carruurta Ilaah iyo kuwa raacsan Masiixa waxaa la siiyay faham ay ku ogaadaan “kuwa runta yaqaan” (aayadda XNUMX).
Marka tan la eego, Muujintii 12,7: 9-8 waa mid aad u layaab badan. Qormooyinka dagaalka ee Muujintii, buuggu wuxuu muujinayaa dagaal dagaal oo u dhexeeya Michael iyo malaa'igihiisa iyo masduulaagii (Shayddaanka) iyo malaa'igihiisii ​​dhacday. Ibliis iyo dameerkiisana waa la jabiyey “meelahoodana mar dambe samada lagama helin” (aayadda 9). Natiijadii? "Oo masduulaagii weynaa, oo abeeso duug ah, oo la yiraahdo Ibliiska iyo Shayddaanka, oo dunida oo dhan khiyaaneeya, waa la tuuray, oo waxaa lagu tuuray dhulka; oo malaa'igihiisiina halkaas lagu tuuray isaga" (aayadda XNUMX). Fikradda ayaa ah in Shayddaanku sii wado dagaalka uu kula jiro Ilaah isagoo silcinaaya dadka Ilaah ee dunida jooga.
Goobta dagaalka ee udhaxeysa xumaanta (Shayddaanku maareynayo) iyo wanaagga (Eebbe) hogaamiyaana wuxuu ka dhashaa dagaal udhaxeeya Baabuloon, tan weyn (aduunka oo ay ka hoos timi shaydaanka) iyo Qudus cusub (dadka ilaahey, in Eebbe iyo Wanka) Raacitaanka Ciise Masiix). Waa dagaal loogu talagalay inuu Ilaah ku guuleysto maxaa yeelay waxba kama adkaan karto ujeedkiisa.
Ugu dambeyntiina, dhammaan cadaawayaasha Eebbe, oo ay ku jiraan Shaydaanka, waa laga adkaaday. Boqortooyada Ilaah - amar cusub oo adduun - ayaa dhulka u soo taagan, oo lagu muujiyey Yeruusaalem cusub ee kitaabka Muujintii. Shayddaanka waa laga saaray jiritaanka Ilaah, boqortooyadiisiina waa la baabi'iyey (Rev 20,10:XNUMX) waxaana lagu beddelay xukunka daa'imka ah ee Ilaah.
Waxaan akhrinaa ereyadan dhiirrigelinta ah ee ku saabsan “dhammaadka” wax walba: “Oo waxaan carshiga weyn ka maqlay codkii yidhi, Bal eeg, rugta Ilaah ee dadka dhex taal! He with dwell them And And And And Isagu wuu la degganaan doonaa, oo waxay ku noqon doonaan dadkiisa, oo isagu isagu Ilaah buu la jiraa, oo wuxuu ahaan doonaa Ilaahood. oo Ilaahna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashaduna mar dambe ma jiri doonto, oo dhib dambena ma jiri doono, oo qayla iyo xanuun midna yeeli maayo. maxaa yeelay kii hore wuu dhaafay. Markaasaa kii carshiga ku fadhiyey wuxuu yidhi, Bal eeg, wax kastaba cusayb baan ka dhigayaa. Oo isna wuxuu ku yidhi: Qor, waayo, erayadanu waa run oo waa hubaal! (Muujintii 21,3: 5-XNUMX).